Proposal Management Software iri Kuwedzera Bhizinesi
Kwemakore mashoma apfuura, kutengesa kwachinja zvakanyanya nekuuya kweiyo dhijitari zera. Kunyanya, maitirwo ari kuita vanhu nekutambira zvikumbiro zvekutengesa zvakagadziriswa pamwe nekuvandudzwa kwe online yekutengesa chikumbiro manejimendi masisitimu, seyedu mutengi TinderBox. Nei mhinduro idzi dziri nani pane kungonyora chikumbiro chekutengesa muMicrosoft Word? Zvakanaka, isu takaita yakazara infographic nezvazvo.
Kubudirira kunowedzerwa zvakanyanya nekushandisa imwe yeaya mhinduro, pamwe nemari. Cloud-based software yakavandudza kufambiswa kwebasa kweyekutengesa maitiro, uye nekudaro, iyo yekutengesa kutenderera yakavandudzwa, futi. Kunyangwe iwe uri bhizinesi diki, wega muridzi, kana hombe bhizinesi mubatanidzwa, maturusi aya ari kuzo chengeta iwe nguva nemari. Asi zvinoenderana nekuti unozvishandisa sei zvakare.
Kukwereta kune akawanda senses inzira huru yekuita tarisiro. Mune chako chikumbiro, iwe unofanirwa kushandisa vhidhiyo, odhiyo (kana zvichibvira), uye mifananidzo kuti utore tarisiro yetarisiro. Mazano akadhirowewa inzira yakanaka futi, asi ita shuwa kuti haina kunyanya kukuvadza. Chirevo chinofanirwa kunge chiri chekuti tarisiro ichaenda sei yekuona zvavanoda zvichizadzikiswa.
Ndiri kuda kuziva - iwe pari zvino unotumira sei uye kugadzira zvako zvikumbiro? Email? Gwaro rezwi? Ndechipi chiri chinetso chako chikuru nezvikumbiro zvekutengesa?
Tags: gettinderboxinfographicproposalchikumbiro manejimendichikumbiro manejimendi softwaretinderbox